gadona tanàna casino resort hetsika foibe
casino ny asa fanadiovana tao amin'ny seranan-elizabeth
casino tanimanga poti for sale
William Havoana dia nanambara fa dia nifindra ny rehetra UK famatsiana herinaratra ireo angovo azo havaozina toy ny ampahany amin'ny mpandraharaha ny fampandrosoana lovainjafy fandraisana an-tanana fiara gadona tanàna casino resort club.
Ny mpandraharaha dia nivadika avy amin'ny grid ny herinaratra ao amin'ny UK angovo mpamatsy Tanteraka mandatsa-Dranomaso sy ny Hery, izay ankehitriny miantehitra amin'ny 100% azo havaozina maitso ny vaomiera herinaratra, anisan'izany ny avy amin'ny herin'ny masoandro, rivotra sy ny herinaratra gadona tanàna casino resort hetsika foibe. William Hill nilaza fa raha mifindra ho madio maitso famatsiana, dia hamonjy ny manodidina 61,500 taonina ny gazy karbonika nandritra ny telo taona ny fifanekena, izay mitovy 38,000 fiara ao ANGLETERA na 16,667 iray-lalana ireo sidina avy any Londres mba Las Vegas. Ny dingana voalohany dia ny iray amin'ireo maro ny fampandrosoana lovainjafy no hanosika ny mpandraharaha dia mifantoka amin'ny ho lasa tsaratsara kokoa sy tsy misy gazy-be, izay ahitana ihany koa feno retail rollout ny manan-tsaina metering manerana ny hilokana ny toeram-pivarotana ao 2021 casino ny asa fanadiovana tao amin'ny seranan-elizabeth. William Hill lohan ' ny didy manamboninahitra David Medori hoe: "efa prioritised ny tontolo iainana toy ny maha tena zava-dehibe ho an' i William Havoana, ary nanolo-tena mba ho lasa Gazy Tsy miandany ny Raharaham-barotra."Efa nametraka mahery vaika lasibatra nandritra ny dimy taona amin'ny C02 fampihenana amin'ny angovo, ny fako, ny fitaterana sy ny rano casino tanimanga poti for sale.
Rehetra metrics ireo eo amin'ny tanjona. Efa ny Fitantanana ny tontolo Iainana Forum ho an'ny fiara amin'ny alalan'ny manan-danja ny fandraisana andraikitra sy ny antoka ireo dia eo amin'ny samy miasa sy PLC Birao ihany koa."Ny foko sy ny samy nanambara ihany koa ny fifantohana mba hanampy amin'ny fiovan'ny toetrandro indray ny volana oktobra, ny fanoloran-tena fampihenana ny raharaham-barotra mivezivezy amin'ny 30% ny fanampiana tonga hery hamonjena ny tanjona napetraky ny Paris Fifanarahana casino clichy boulevard jean jaures. Tany am-piandohan'ity volana ity, William Hill nitatitra ny 16% - taona-on-taona indray mitete amin'ny vola miditra aterineto ho feno taona 2020, nidina ho any £1.32 bn ($1.81 bn), nanonona ny fiantraikan'ny ny coronavirus areti-mifindra..